universe – Page3– Set Kyar
Laravel WebSockets + SPA (Laravel Echo + Passport)
Posted on Published April 24, 2020 February 1, 2020 by universe
At work, I need to addachatting feature then need Websocket. First, I was thinking to use services like pusher, PubNub, etc… But, those areabit expensive. Still okay to use for our usage, but I keep exploring the other alternatives and found out the Laravel WebSockets package and socket.io with Redis. After […]
Dotfiles of the Universe
Posted on Published February 1, 2020 February 1, 2020 by universe
I always wanted to automate all my configuration and setup. But, haven’t done it. Today, I was checking how other people are automating their setup. Found out, others use dotfiles. That’s exactly what I wanted to do. So, I created my own dotfiles configuration and publish to Github. Vim Configuration For now, I am automating […]
Programming Related talks that I watch in 2020
Posted on Published February 8, 2020 January 30, 2020 by universe
This is in progress, I will keep adding the talks I love to watch the talks. And talking about those, how it’s interesting for the topic and etc. After I watchatalk I want to talk about it to someone and share the knowledge with them. But, I think sometimes it’s notareally […]
Posted on Published January 27, 2020 January 27, 2020 by universe
I know the basics of Vim. Like how to move around and stuff. But, I never try as my main editor. But, in the past few days, I wanted to try Vim as my main editor. [ yep this happened when my MacBook pro was so heated when I run the unit tests and I […]
My curiosity about how does ssh work?
Posted on Published January 24, 2020 by universe
I am using ssh every single day and I know why I need to use it. But, I don’t know how does it work. And my curiosity starts to begin. I foundavery nice article on DO. But, I still want an explanation via video. Then I go through YouTube and found out the […]
Posted on Published January 12, 2020 January 12, 2020 by universe
ဒီ YouTube က video လေးကြိုက်လို့ sub-title ကိုပြန်ပြီးတော့ Article အနေဖြင့်ရေးထားလိုက်တယ်။ YouTube ကြည့်နေရင်းနှင့် Lost ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း ဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့။ There’satrue story about the student who showed up late to math class. He copied the problem that was already written on the board, assuming it was homework, and solved it that week. Only afterward did he find out the […]
Posted on Published January 11, 2020 January 11, 2020 by universe
ကိုယ်ပိုင်မှတ်သားအသုံးပြု remind လုပ်ရန်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။Thoughtbot က Code Review Guide၊ Google က Code Review Guide နှင့်အခြားသော Code Review best practices တွေပေါ် Reference ထားပြီးတော့ ကိုယ့်အာပေါ်နှင့်ကိုယ့်အတွေးများဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်အတွက် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ Reviewer Guide Review လုပ်ရင်စစ်တဲ့အချက်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်… Code ကလက်ရှိ Code Base ရဲ့ style guide ကို follow လုပ်ရဲ့လား Code ကမလိုအပ်ဘဲ complex ဖြစ်နေသလား Code မှာ unit test ပါရဲ့လား Appropriate Naming တွေဖြစ်ရဲ့လား Comment တွေပါရင်လည်း ရှင်းလင်းအသုံးဝင်ရဲ့လား၊ လိုကောလိုအပ်ရဲ့လား မလိုအပ်ဘဲနှင့် over-engineering […]
Posted on Published January 10, 2020 by universe
ကျွန်တော့်ရုံးက PHP Laravel ကိုသုံးတော့ နေ့စဥ်ဒါတွေဘဲသုံးနေရတယ်။ သုံးနေရင်းနှင့်မှ ကိုယ်ရေးတဲ့ code base ကိုဘယ်လို improve လုပ်မလဲ အမြဲတမ်းသေချာလိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ Refactoring လုပ်တဲ့နေရာမှာ (သို့) Code ရေးမှာအသုံးဝင်တဲ့ Tips တွေ Trick တွေကိုမြင်ရင်… အော်ငါလည်းဒီလို improve လုပ်လို့ရပါ့ဘဲဆိုပြီးဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ်ရေးနေရင်းနှင့်လည်း ဟာဒီလိုလေးဟိုအပိုင်းမှာလုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာဘဲလို့ light bulk လေးပေါ်တယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တိုင်း အရင်ကကိုယ်သုံးနေကျ Notes လေးတွေထဲမှတ်လိုက်… telegram ထဲမှာဘဲပြန်ပို့ပြီးတော့ အားလုံးကဟိုတစ်စုဒီတစ်စုဖြစ်နေတယ်။ အဲ့လိုမျိုးတစ်စုစီဖြစ်နေတာတွေကို အခု Laravel Tips ဆိုပြီး GitHub repo လုပ်ပြီး ပြန် share လိုက်တယ်။ Laravel Tips – https://github.com/setkyar/laravel-tips
Posted on Published January 8, 2020 January 8, 2020 by universe
၂၀၁၉ တုန်းကဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲမေးရင် လုပ်ဖြစ်တာတွေတော့အများကြီးဘဲ။ ဒါပေမယ့် List ဘာမှမရှိဘူး။ သေချာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စမ်းစစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ဒီ Post ရေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို track ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဒီ Background နှင့်ကောင်တွေ့ကတက်နေဆဲ Course တွေ။ ဒီ Background နှင့်ကောင်တွေက ကိုယ်တက်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ Course… လက်ရှိကျွန်တော်လိုက်လုပ်နေတဲ့ Course ကတော့ www.usegolang.com ဘဲ။ အရင်အခြေခံ Go လောက်နည်းနည်းလုပ်ဖူးပေမယ့် သေချာ application development structure တွေဘာတွေဘယ်လိုမျိုးချကြလဲ workflow ကဘယ်လိုလဲဆိုတာမျိုးတွေမသိလို့မလို့ ဒီ Course ကနေလေ့လာဖြစ်နေတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်စနေနေ့လိုမျိုးမှဘဲသေချာလိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ တက်ပြီးသွားရင်တော့ဘယ်လိုမျိုး Knowleadge ရလဲဆိုတာမျိုးကိုဖော်ပြရေးသားသွားမယ်။
၂၀၂၁ မရောက်မချင်းဤဆောင်းပါးသည်ဆက်တိုက်ရေးသားဆဲဖြစ်နေမည်။ Goodreads ကိုသုံးရတာလုံးဝမကြိုက်လို့ ၂၀၁၉ track လုပ်ထားတာလေးတွေလည်းသေချာမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့်နှစ်စမလို့ထင်တယ်ဒီနှစ်မှာဘာတွေဖတ်ဖြစ်လဲဆိုတာတော့ track လုပ်ချင်တာမလို့ဒီ Post လေးကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ဖြစ်တိုင်း track လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားလိုက်တယ်… နောက်ခံလိမ်မော်ရောင်ပြထားတဲ့စာအုပ်များသည်ကျွန်တော်အဆုံးထိဖတ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ နောက်ခံအဝါရောင်ပြထားသော စာအုပ်များသည် ကျွန်တော်ဖတ်လတ်စစာအုပ်များဖြစ်သည်။ Help I haveaManger ဆိုတဲ့ zine (zeen လို့အသံထွက်တယ်) စာအုပ်တောင်မဟုတ်ပါဘူး… Article လောက်ဘဲရှိတာလေးဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ list ထဲဘာလို့ထည့်လဲဆိုရင် စာအုပ်နှစ်အုပ်စာလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခံစားရလို့ပါ။ Manger အလုပ်ဆိုတာဘာလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်သင့်တယ်။ နောက်ထပ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကတော့ The Manager’s Path ဆိုတဲ့စာအုပ်။ ၂၀၁၉ လက်ကျန်ပီးခံနီးနေပီ… ခဏထားထားတာ… ပီးမှဖတ်မယ်ဆိုပီးတော့ 😁။ သူလည်း Management မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းဖတ်ထားဖို့သင့်တယ်။ ကိုယ့်အထက်ကလူတွေကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတာတော့အနည်းဆုံးသိရတာပေါ့။ စာအုပ်ကအဓိက techinical management စာအုပ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ နောက်ထပ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကတော့ […]